Daawo sawirada ciidamada nabadsugida oo dad ku laayay magaalada Muqdisho. |
Daawo sawirada ciidamada nabadsugida oo dad ku laayay magaalada Muqdisho.
Ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ayaa Habeenkii xalay ahaa xaafada Gubta ee degmada Dayniille waxa ay ku khaarijiyeen afar ruux oo ay kala bexeen xabsiyada ay maamulaan ee ku yaalla magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen eheada dadka ladilay qaarkood.
Afarta ruux oo xalay ladilay ayaa rasaasta waxaa looga dhuftay madaxa iyada oo ay sabatay in sahal loo garan waayo.
Mid kamid ah afarta ruux ee dil wadareedka lagu fliyay ayaa eheladiisu waxa ay sheegeen in ay ugu war danbeysay isaga oo ku xiran xarunta nabad sugidda Soomaaliya.
Habeenkii Talaadada aheyd oo sidaan oo kale afar qofood magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan loogu dilay ayaa waxaa lasheegay in dhamaan kooxaha lakhaarijiyay ay ahaayeen maxaabiis Shabaabnimo u xireen ciidamada Nabad sugida Soomaaliya.
Dilkaan isdaba joogga ah ee maxaabiista Shabaabnimada loo hayay lagu hayo ayaa waxaa ay timid kadib markii Axmed Macalim Fiqi oo ah sarkaalka ugu sareeya nabad sugidda Soomaaliya uu ku dhawaaqay in ladili karo ruux kasta oo Shabaab ay u arkaan ciidanka Nabad sugidda Soomaaliya.
Go’aankaas Fiqi uu qaatay waxaa aad uga carooday wax garadka Muqdisho oo sheegay in ay suuragal tahay in looga faa’iideesto dana gaar ah oo ciidanku dili karaan cidda ay doonaan iyaga oo ugu gabanaya go’aanka madaxdooda.
Nabad Sugidda iyo dowlada Guud ahaan kama hadlin sideeda ruux ee iyada oo xabsiyadooda lagu ogaa xalay iyo habeen hore lagu kala dilay Muqdisho, lamana oga sida ay uga jawaab celi doonto dhaleeceynta kasoo gaareysa arinkaasi.